Banijya News | » धरासायी बन्दै म्यानपावर कम्पनीः वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निकै सकस धरासायी बन्दै म्यानपावर कम्पनीः वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निकै सकस – Banijya News
धरासायी बन्दै म्यानपावर कम्पनीः वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन निकै सकस
०८ फागुन, काठमाण्डौ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल हजार भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी दर्ता रहेका छन् । जसमा करिब २ सय वटा म्यानपावर कम्पनीको मात्र गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच रहेको छ । वर्षमा एक सय जना भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई आधार मानेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सयभन्दा बढी म्यानपावर धरासायी अवस्थामा रहेको पाइएको छ । मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा सय वटा म्यानपावर व्यवसायीले १ जनालाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेपछि ती म्यानपावर कम्पनीहरू धरासायी अवस्थामा पुगेको प्रष्ट भएको हो ।
सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ । कतिपय कम्पनीले भने एक वर्षमा सो संख्या पुर्याउन पनि निकै नै सकस बेहोरेको पाइन्छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा सय वटा म्यानपावर कम्पनीले १ जना पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेका छैनन् । जसमा ६४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले कारबाही गरी कारोबार बन्द राखेको थियो भने ३६ वटा म्यानपावर कम्पनीको कारोबार खुल्ला रहँदा पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका हुन् । ६४ म्यानपावर कम्पनीले १ जना मात्र, ३८ म्यानपावर कम्पनीले २ जना मात्र, २३ म्यानपावर कम्पनीले ३ जना मात्र र ३० म्यानपावर व्यवसायीले ४ जना मात्र पठाएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर सूचीको पहिलो नम्बरमा दि रिभर ओभरसिज प्रा.लि. परेको छ त्यस्तै, सूचिको दोस्रो नम्बरमा एसओएस सर्भिसेस प्रा.लि
तथा तेस्रो नम्बरमा प्यारडाइज इन्टरनेसनल सर्भिस प्रा.लि रहेको छ ।
रिभरले ओभरसिज प्रा.लिले माघ महिनामा मात्रै ५ सय २० कामदार पठाएको छ । एसओएस सर्भिसेस प्रा.लि.ले ३ सय ३८ कामदार पठाएको छ । . प्यारडाइज इन्टरनेसनल सर्भिस प्रा.लि ले ३ सय ३० जना पठाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या आ.व ०७६÷७७ को अहिले सम्ममा ३ लाख १ हजार ४ सय २५ पुगेको छ । माघ महिनामा श्रम स्विकृति लिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै अदक्ष कामदार रहेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनी मार्फत कामका लागि जान सक्ने भन्दै १ सय ७२ वटा देशका लागि स्विकृति दिएको छ । संस्थागत श्रम स्विकृतिमार्फत २५ हजार १ सय ७१ जना, पुनः स्विकृति लिएर २१ हजार ३ सय ४४ जना, नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिमार्फत १ हजार २ सय ३४ जना, वैधानिकीकरण गरेर ९ सय २५ जना कामदार गएका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीले गैर कानुनी रुपमा रोजगादाता देशबाट डिमाण्ड (माग) ल्याएर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै आएका छन् । रोजगार गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीसम्म सिधैं पहुँच नभएका व्यवसायीले गैर कानुनी माध्यम बाट भिसा ल्याउने गरेका छन् । भिसा गैरकानुनी रुपमा किन्ने हुदाँ धेरै म्यानपावर व्यवसायी पनि ठूलो रकममा ठगिने गरेका छन् । पछिल्लो समय गैरकानुनी कारण रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्ने एचआरले पनि सिधा डिमाण्ड म्यानपावरलाई दिन गाह्रो मान्न थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा व्यवसायी भन्दा एजेन्टकै बोली चल्ने गरेको छ । रोजगार गन्तव्य देशमा रोजगारदाता कम्पनिमा एजेन्ट नै सक्रिय भएका डिमाण्ड र भिसाको कारोवार गर्छन् । नेपालमा रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारलाई म्यानपावरसम्म ल्याउने काम पनि एजेन्टले गर्छन् । जसका कारण कतिपय कामदार गन्तव्य देशमा समस्यामा पर्दा म्यानपावर व्यवसायी अनभिज्ञ हुन्छन् । त्यसैले कामदार विदेशिनस अगावै सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझेर मात्र जानुपर्छ अन्यथा दुःख मात्र हात लाग्ने निश्चित छ ।